Yini Efaka Indoda Emfazini | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 24/05/2022 14:08 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Izithandani Nezocansi
Ufuna ukwazi Indlela yokwenza indoda ithandane nowesifazane? Nakuba kubonakala kulula, baningi abantu besifazane abangazi ukuthi babugcina kanjani ubudlelwano futhi kwesinye isikhathi lokhu kudala ukuthi bubune. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini izingwegwe indoda kowesifazane, sikunikeza amathiphu ayisihluthulelo ukuze uthando luyaqhubeka nokugcina inhlansi.
Uma uqala ubudlelwano, akumele ukuvumele ukuthi buwele ekukhohlweni, kufanele ngaso sonke isikhathi gcina umugqa futhi ungavumeli yonke into ibe umkhuba. Ngokuvamile amadoda akhetha abesifazane abathandekayo, abanomusa futhi abaqondayo kakhulu.
1 Yini ehlanganisa indoda kowesifazane?
2 Amadoda abhekani kowesifazane?
2.4 ubuhlakani nolwazi
2.6 ukuzimela ngokomzwelo nangokwezimali
2.7 Uyathanda ukuzenzela izinqumo
Yini ehlanganisa indoda kowesifazane?
Induduzo yokuba nalowo muntu futhi ukwamukelwa kunqoba yonke into engenzeka ngokwesibili. Indoda ezizwa ikhululekile ukuveza imizwa yayo nalapho ingamsekela khona futhi ize inikeze izeluleko ezingaphezu kwesisodwa ithanda kuphela.
Okushiwo okuningi kunalokho okungavezwa kungaba ukuthi lo mlingani kufanele athembeke, athembeke, athembeke, ahloniphe futhi, ngaphezu kwakho konke, abe nomuzwa wokuhleka. Umuntu wesifazane okwaziyo ukulalela, othanda ucansi, okwaziyo ukupheka ngisho onothando imininingwane eyenza indoda ihuge owesifazane.
Amadoda abhekani kowesifazane?
El ninezinto enifana ngazo futhi nithandane ngokufanayo ngoba impilo yizindaba ezihlala zenza umbhangqwana uhlangane. Sizobuyekeza ukuthi izihluthulelo zokukhanga owesilisa kowesifazane zisebenza ngokulinganayo ngokuphambene nokuthi lezi ezinye ze izici ezicatshangelwa.
Ngokungangabazeki, umbono wokuqala yilokho okubalulekile, futhi nakuba kungase kubonakale kukha phezulu, ngeke sizikhohlise ngalo mbono. Iseluleko sithi hamba umuhle futhi umuhle, kodwa futhi gqamisa izici zesici ze ubuhle ngokwemvelo. Owesifazane angase angaweli ohlwini lwezincwadi zobuhle futhi usathandeka njenganoma yimuphi omunye.
Ukunuka kahle kungenye yezinto ezikuhlanganisayo. embonini yamakha kukhona inala amakha esezitholakala kunoma ngubani futhi ukusebenzisa eyodwa ngokobuntu iyona engcono kakhulu yemidlalo. Ngakolunye uhlangothi, kukhona iphunga eliyisici emizimbeni yethu elingokwemvelo futhi okuyilona elifuna ukukhunjulwa. Ungakhohlwa indlu yangasese enhle futhi uvumele umzimba wakho uhogele uhlanzekile nencazelo yephunga lomzimba wakho wemvelo.
Enye ikhwalithi engemuva kwaleyo ebuyekeziwe, kodwa enenani elicishe lifane. iphimbo nevolumu bangaphuma kushuni futhi lokho kungadlala amaqhinga.
Isithombe senza okuningi ukuze indoda ibanjwe, kodwa ngemuva kwayo kukhona ukuhlakanipha kwabesifazane ukuthi usengayibamba kakhulu. uma ikhona isixazululo sokungqubuzana ukuthi zenzeke ngendlela engenzeka ngesikhathi sokushuba, okwenza indoda imenze ahlale.
Ayikho into efiphaza umuntu njengokubona owesifazane ozethembayo, ngaphandle kokungabaza, ngaphandle kokunquma futhi ngaphezu kwakho konke ngaphandle kokungavikeleki. Ukuthi bazi ukuthi bangabhekana kanjani nokuphila ngokuhluzeka nokuzimisela okuphelele.
Ngisho ukuzanelisa kuyangena ngaphakathi kwalokhu kuphepha. Uma owesifazane ekwazi ukuxazulula izingxabano ezingokomzwelo ngokuzimela futhi ngaphandle kosizo lwanoma ubani, angakhanga kakhulu kumuntu.
ukuzimela ngokomzwelo nangokwezimali
Abantu abanokuzimela ngokomzwelo bayathandekaKufanele bazi ukuthi bangazivumela kanjani ukuthi balawule lokho kucindezeleka futhi babe namakhono engqondo-ngokomzwelo ukuze babhekane nanoma yisiphi isimo. Asikhulumi ngokwenza okubandayo nokungenamdlandla, kodwa mayelana ube nobuhlakani bemizwa futhi ukwazi ukunikeza ngokuqiniseka umzuzwana wokushuba.
Ngakolunye uhlangothi, ukuzimela ngokwezomnotho kungamkhanga indoda; kodwa hhayi ngenxa yeqiniso elilula lokwazisa lokho onakho, kodwa ngombono okukhiqizayo ngokwakho. Konke lokhu kuzoba yisisekelo sendlela yabo ezimele futhi ewujuqu yokwazi ukuthi bathola kanjani uzinzo.
Uyathanda ukuzenzela izinqumo
Abesifazane bathanda ukuzimela kwabo, futhi amadoda amaningi nawo ayathanda. Ukuhlonipha indawo yendoda kubalulekile. Ungazizwa unamathele ekuhlanganyeleni ngokuphelele naye yonke into, mhlawumbe awumniki leso sikhala esincane asidingayo. Isibonelo, lapho owesilisa efika ekhaya evela emsebenzini futhi efuna ukuhlala phansi imizuzu engu-30 ukuze aphumule, kufana nokumnika leso sikhala.
Yingakho kukuhle ukuba nakho ukuzimela ngokuphelele ngaphandle kwakho Unganciki kwabanye abantu ukuthi bathathe izinqumo. Ukwesekwa kuhlale kukuhle, kodwa akufanele ungene emkhubeni wokuhlala uncike ngothile noma kokuthile.
Futhi ngaphezu kwakho konke, owesifazane wamanje ohlala ehamba futhi othanda okusha kufana nokuthandana. Yiba nquma ibhekana nezinkinga ngokuzimela, ihlale ihambisana nesikhathi futhi inesibindi sokuzifaka engozini. Ngabe zonke lezi zizathu yizo ngempela ezihuga indoda?
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Yini ehlanganisa indoda emfazini